Coinbase iqala uvavanyo lokugqibela Segwit - Blockchain News
Coinbase iqala uvavanyo lokugqibela Segwit
Coinbase ubhengeze on Twitter ukuba uvavanyo Bitcoin SegWit sifo lwenziwa ngamanqanaba lokugqibela, kwaye ziya kufumaneka Bitcoin ukuthumela ezamkelela “kwiiveki ezimbalwa ezilandelayo.” Le nkqubo yenzelwe ukunciphisa imirhumo Bitcoin kunye namaxesha transfer, kwaye zokunciphisa umthwalo kwi network yayo.
BTC: ngababini USD kwi-akhawunti exchange GDAX Coinbase kaThixo malunga 5% of umthamo ngemihla zokurhweba bitcoin xa, ngokutsho CoinMarketCap. Xa usongeza kwezinye inkonzo nomthengisi BTC Coinbase, nezinye izibini lwemali kunye nezinye iintengiselwano ukuba kukhuselekile ukucingela ukuba inxalenye enkulu yemicimbi yemihla ngemihla kwenzeka ngokusebenzisa Coinbase / GDAX.
Ngenxa yoko oku kungenzeka feasibly nempembelelo kubonakala phezu amaxesha Bitcoin intengiselwano jikelele kunye nemirhumo.
States American: Mining kufuneka kubalwe
Representative of th ...
Bloomberg uqala c ...
Post Previous:Kumazwe ahlukeneyo, Amaxabiso bitcoin ingahluka
Post Next:ezine kuphela eneji Crypto bathobele iimfuno umlawuli South Korea